Inona no atao hoe CPC? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny C	» CPC
CPC no fanafohezana ny Vidiny isaky ny kitiho.
Ity dia fomba iray ampiasain'ny mpanonta handoa habaka doka amin'ny tranokala iray. Ny doka ihany no mandoa ny doka rehefa kitihina fa tsy amin'ny fampirantiana. Afaka miseho amin'ny tranokala na pejy an-jatony izy io, saingy tsy misy sarany raha tsy voahetsika.